Izixhobo - Dongguan Weldo ngqo machining Co., Ltd.
Kwi kule minyaka ili-10 idlulileyo, siye saqokelela amava amaninzi. Gcwalisa izixhobo zezityalo, iteknoloji yokuqala yomsebenzi, amava okulawula. Sinokubonelela ngokuchanekileyo kwinqanaba eliphezulu kubathengi. Besisoloko sinebhongo ngayo.
Kubukhulu, sibeka umgangatho wemveliso kuqala. Wonke umsebenzi, lonke ikhonkco, yonke inkqubo kunye nenkqubo ixhaswa sisixhobo. Sivelisa ubuchwepheshe obuphezulu. Phumelela ngomgangatho.
Kubukhulu, sinika ingqalelo enkulu kuyo yonke ikhonkco lenkonzo.
Abahloli bemigangatho bahlala bejonga iimveliso zethu ukuqinisekisa umgangatho kunye nomgangatho weemveliso. Siza kuba nezixhobo zokuphononongwa kwamalungu, ukuze ababoneleli babe negama elihle kakhulu kunye neerekhodi ezikumgangatho ophezulu iminyaka emininzi.
Umqeqeshi uhlala enika uqeqesho kubuchwephesha kunye neempendulo kubasebenzi bobuchwephesha, ephucula ulwazi lobungcali lwabasebenzi, kwaye egxila kwinkqubo yokusebenza, ukuze kuphuculwe umgangatho womgca wemveliso kwaye kwenziwe iindawo ezikumgangatho ophezulu wokuchaneka.
Umatshini unamava atyebileyo oomatshini. Baza kujonga rhoqo kwizixhobo zemveliso ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo koomatshini.
Amasebe akhokelayo anamava obutyebi obutofotofo akhokelela kubungakanani bokuvelisa ibhetshi yamalungu achane kumgangatho ophezulu.
Siyathemba ukuya kwihlabathi, vumela umhlaba ukuba ubone iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kwaye sisebenzise iimveliso zethu. Yenza ixabiso elingaphezulu kuwe.